_ Mwedzi Wuthering_, naEmily Bronte. 6 zviso zvaKatherine Earnshaw naHeathcliff | Zvazvino Zvinyorwa
_ Mwedzi Wuthering_, naEmily Bronte. 6 zviso zvaKatherine Earnshaw naHeathcliff
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | dzakawanda
Emily Bronte akazvarwa pazuva rakafanana nanhasi 199 makore. Kashoma zvakanyanya tarenda rekunyora vakasangana zvakare mumhuri imwe chete, asi iye nehanzvadzi dzake Charlotte (Jane Eyre, Shirley) uye Anne (Agnes Grey, Muroja weWildfell Hall) vaive vasiya nekusingaperi. Nyaya yaEmily inotonyanya kushamisa nekuwana husingagumi neinovhurika, Zvikomo zveWuthering (1847). Musoro wakakodzera wemusangano uyo wakazopedzisira wasvika se chiratidziro chevictorian rudo nyaya.
Yakasainwa pasi pseudonym ye Ellis bhero uye yakatukwa nevatsoropodzi venguva, yakazoonekwa semuenzaniso wakasarudzika weiyo kudzika uye zvimwe zvirimo kutaura kweChirungu kudanana mweya. Kugadzikana kwayo murima Yorkshire mamori uye ayo makuru mavara, iwo asingachinji Katherine earnshaw uye yemusango uye ine shungu heatcliff, mwanakomana chisingakanganwiki. Nhasi tinotarisa dzimwe zviso uyo akavaridza mumakumi e firimu uye terevhizheni zvinoenderana izvo zvakaitwa.
Kutambudzika kwangu kukuru munyika ino kwave kuri kutambura kwaHeathcliff, ndakaona uye ndikanzwa imwe neimwe kubva pakutanga. Pfungwa huru yehupenyu hwangu ndiye. Kana zvese zvikaparara uye akaponeswa, ini ndaizoenderera mberi ndiripo, uye kana zvese zvikasara uye iye akanyangarika, nyika yaizoshamisika zvachose kwandiri, hazvingaratidzike kwandiri kuti ndiri chikamu chayo. Kuda kwangu Linton kwakafanana nemashizha esango: nguva ichaichinja, ini ndatoziva kuti nguva yechando inochinja miti. Rwangu rudo kuna Heathcliff rwakafanana nematombo asingagumi akadzika, sosi yechinhu chidiki chinoonekwa asi chinodiwa. Nelly, ini ndiri Heathcliff, anogara ari, nguva dzose mupfungwa dzangu, kwete sekunakidzwa, sezvo ini ndisiri mufaro kwandiri, asi seangu ega. Saka, usataure nezvekuparadzanisa zvakare, hazvigoneke ...
Ndizvozvo imwe yendima dzinozivikanwa kwazvo yeizvi zvakanyanya uye zvinotyisa nyaya yerudo, kutsiva, ruvengo uye kupenga pakati paKatherine Earnshaw naHeathcliff. Uye iyo iine iyo musimboti iyo inopfupisa iyo chaizvo chaizvo. Rudo rusingapfuurike kufa uye nevazukuru vake.
Zvisinei, chimiro chayo senhau chakaoma uye, panguva iyoyo, zvakashamisa vatsoropodzi nevaverengi. Hazvisi nyore kuverenga Uye, senguva dzose, ivo vanozove vakapusa kana avo vasina kukwanisa kupfuura mapeji ekutanga. Saka, tinodzoka zvakare ku yakasununguka sarudzo: yavo akasiyana magadziriso neshanduro mufirimu neterevhizheni. Aya angori mashoma.
Zvikomo zveWuthering (1939)
Kugadzirwa kweNorth America kunotungamirwa naWilliam Wyler, yaive yekutanga kugadziridzwa kweiyo bhaisikopo. Aive nechimwe chezvakakonzera izvo zvakaunza pamwe zvakanakisa zveBritish kuita panguva iyoyo. Lawrence Olivier, Merle Oberon naDavid Niven vakanyora Heathcliffs, Katherine naEdgar Linton nezwi rakadzora panguva iyoyo.
Zvikomo zveWuthering (1970)
British. Yakanga ichitungamirwa naRobert Fuest uye nyeredzi nevaya-vatsva vaTimothy Dalton naAna Calder-Marshall. Yakasarudzwa paGolden Globes yeGood OST.
Zvikomo zveWuthering (1992)
Zvakare maBritish. Izvozvi zvave makore makumi maviri nemashanu kubvira pakuratidzwa kwekugadziriswa uku kwakatungamirwa naPeter Kosminsky. Yakarongedzwa nevatambi vaviri mune akanakisa emabasa avo: French Juliette Binoche neChirungu Ralph Fiennes. Uye rwiyo rwakanaka, rwakatove rwakakodzera kutarisa, rwakasainwa nemunyori wechiJapan Ryuichi Sakamoto.
Zvikomo zveWuthering (1998)
MuBritish terevhizheni bhaisikopo rinotungamirwa naDavid Skynner. Ivo protagonists ndiOlla Blady naRobert Cavanagh. Wechidiki Matthew Macfadyen aivepowo saHareton Earnshaw, mumwe mutambi wenguva dzose wenyaya dzenyaya uye akazozivikanwa.
Zvikomo zveWuthering (2009)
Maviri-episode terevhizheni miniseries inotungamirwa naCoky Giedroyc uye nyeredzi naCharlotte Riley uye asiri-achiri kuzivikanwa Tom Hardy, vaive vaviri chaivo-vehupenyu.
Zvikomo zveWuthering (2011)
Yakanga ichitungamirwa naAndrea Arnold uye nyeredzi Kaya Scodelario saCatherine naJames Howson saHeathcliff.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » _ Mwedzi Wuthering_, naEmily Bronte. 6 zviso zvaKatherine Earnshaw naHeathcliff
5 zvikonzero zvekuverenga mapepa mabhuku
Tourism uye mabhuku: 7 zvinyorwa zvinyorwa zvaunogona kushanyira